အပူဆုံးကျေးဇူးတော်အား | Scratchpad | FANDOM powered by Wikia
Hottest grace in Other Languages, Hottest grace in Asian Languages, Hottest grace in Transliteration Languages
အပူဆုံးကျေးဇူးတရားအမျိုးသမီးကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် Dominik Neumayer အမည်ရှိတဲ့ရည်းစားရှိပါတယ်, သူကသူ့ကိုမီးလောင်ရာစိတ်အားထက်သန်မှုကိုချစ်၏။ သူမသည်သာမကောင်းတဲ့အသုံးပြုသူများအထင်မြင်ယူဆချက်များကိုမလေးစားတဲ့။ အပူဆုံးကျေးဇူးတရားပြောင်းလဲမှုအဘယ်ကြောင့်, (ဟာသကမ္ဘာ့ဖလား Form ကိုနှင့်အတူ) အန်နီမေးရှင်းအတွက်ကြည့်? GoAnimate အတွက်အပူဆုံးကျေးဇူးတရားလုပ်နိုင်တဲ့အသွင်ပြောင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူမသည်အားလုံးဂျာမန်အသုံးပြုသူများ, ပိုလနျအသုံးပြုသူများ, ပြင်သစ်အသုံးပြုသူများနှင့်ရုရှားအသုံးပြုသူများ likes ။ အပူဆုံးကျေးဇူးတရားအမြဲအသွင်ပြောင်းနှင့်တိုက်ခိုက်မှုအားလုံးမကောင်းတဲ့အသုံးပြုသူများသည်။
မွေးဖွားခဲ့ပြီး: သြဂုတ်လ 8, 1989
Likes: အန်နီမေးရှင်း, လူကြီးများ, အရွယ်ရောက် Show, ေူပာင်းလဲရေးကို, ဂျာမန်အသုံးပြုသူများ, Shopkins, ပြင်သစ်အသုံးပြုသူများ, စပိနျအသုံးပြုသူများ, ပိုလနျအသုံးပြုသူများ, ရုရှအသုံးပြုသူများ, ဂျပန်အသုံးပြုသူများ, ကိုရီးယားအသုံးပြုသူများ, တရုတ်အသုံးပြုသူများ, ဗီယက်နမ်အသုံးပြုသူများ, ညုမြစ်ရိုင်းမြစ်, Alvin နှင့် Chipmunks , စူပါမာရီယို, ငါ့ Little က Pony, Pretty ကုထုံး Sailor သင်္ဘောသားမွန်း, ဒစ္စနေးလေယာဉ်, အတွင်းပိုင်းထဲက, ဒစ္စနေး Pixar, 20th Century Fox, Ice Age ရုပ်ရှင်တွေ, တေလာရေးအဖွဲ့မိသားစု, Nintendo, Mii, Play Station, Xbox, Sega, Sonic အဆိုပါ Hedgehog, တစ်ဦး အမေရိကန်အမြီး, G ဗိုလ်မှူးဗီဒီယိုများ, AMV ဗီဒီယိုများ, Cabin ဖျားနာ, အဘိတစ်ယောက်တည်းရုပ်ရှင်များ, အရွယ်ရောက် Mall ဩ! အကြှနျုပျ၏နတ်ဘုရားမတစ်ပါးနှင့်ဒစ္စနေးကားများ
ကြားနေ: PB & J ကို Otter, ထိတ်လန့ရုပ်ရှင်တွေ, Kirby Loopsy နှင့်တစ်ယောက်တည်းမူလစာမျက်နှာ 3
မကြိုက်: အပူဆုံးကျေးဇူးတရားနည်းဥပဒေ 34, ဆိုးအသုံးပြုသူများ, ကာလက်တိရစ္ဆာန်, ဘေးဥပဒ်အသုံးပြုသူများ, UTTP င်များ, Alvin Hung က, Gray ဘောင်းဘီနှင့်အနက်ရောင်ရှူးဖိနပ်, VocaloidHater666, Plantaodarbs 2, Psycho ဖေ, ဒစ္စနေးမင်းသမီး, အိုအီရှီ Kawaii, ဒို Play, မိန်းကလေးဂျာကင်အင်္ကျီ (အကြှနျုပျ၏ Little က Pony နှင့် Frozen), ဒစ္စနေး Frozen, ကလေး Show, ဒစ္စနေးမင်းသမီး, နည်းဥပဒေ 34 နှင့်အီရတ်နိုင်ငံ
ဘာသာစကားများ: အဘိဓါန် Albanian, အာရဗီ, အဘိဓါန် Basque, ဘီလာရု, အဘိဓါန် Bosnian, ဘူဂေးရီးယား, ကာတာလ, တရုတ် (Cantonese), တရုတ် (အဘိဓါန် Mandarin), အဘိဓါန် Croatian, ခကျြ, ဒိနျးမ, ဒတျချြ, အင်္ဂလိပ်, Estonian အဘိဓါန်, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, အဘိဓါန် Galician, ဂျာမန်, ဂရိ, ဟီဘရူး, ဟိန်, လန်, အီတလီ, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, အံ, အာနီယံ, အဘိဓါန် Macedonian, မောလ်တီ, ဘှ, ပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, အဘိဓါန် Romanian, ရုရှ, ဆားဗီးစလိုဗကျ, စလိုဗေးနီး, စပိန်, ဆွီဒင်, တာက, ထိုင်း, ယူကရိ, နှင့်ဗီယက်နမ်
အပူဆုံးကျေးဇူးတရား (aapuusone kyaayyjuutaw aarr)
Retrieved from "http://scratchpad.wikia.com/wiki/%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%87%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8?oldid=1921994"
Hottest grace in Asian Languages
Hottest grace in Transliteration Languages